» आज दशैँको पहिलो दिन घटस्थापना, ‘गहुँ नराखेर जौँ’को जमरा किन राखिन्छ ?
आज दशैँको पहिलो दिन घटस्थापना, ‘गहुँ नराखेर जौँ’को जमरा किन राखिन्छ ?
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुन दशैं आज बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।
घटस्थापनाको साइत बिहान ११ बजेर ४६ मिनेटमा रहेको छ । आज चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले ११ः४६ बजेअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्ने छ ।
दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना गरिन्छ । घटस्थापना अर्थात घैंटो, घडा वा कलश स्थापना गर्नु नै घटस्थापनाको मूल अर्थ हो । घडाको मुखमा भगवान विष्णु, गलामा महादेव, मूलमा ब्रह्मा तथा मध्य भागमामा देवी शक्तिको निवास मानेर सोही अनुसार पूजा गर्ने गरिन्छ ।
संस्कृत भाषमा यव भनेको जौ हो । वेदको मन्त्रमा भने यवलाई ज्यव भनेर उच्चारण गरिन्छ । यसरी ज्यव उमार्नुलई नै जमरा भनिएको हो । जौँ नै किन उमार्ने रु धान, गौँ किन नउमार्ने भन्ने विषयमा फरक फरक मत छ । विशेष गरी अन्नमा पनि जौँलाई सबैभन्दा पुरानो अन्नको रुपमा लिइन्छ र जौँ भगवानको प्रिय वस्तुसमेत भएकाले यसको प्रयोग गरिएको हो ।
दशैं मनाउने विषयमा कुनै शास्त्र पुराणमा उल्लेख नभएपनि नवरात्रको नौ दिन देविको पूजा आराधना गरि दशौं दिन नौ दिनसम्म पूजा गरेको देविको प्रसाद ग्रहण गर्ने भएकाले नै यसलाई दसैंका रुपमा मनाइँदै आएको हो ।
दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा दशैंलाई भगवती दुर्गाले आसुरी शक्तिमाथि पाएको जितको प्रतिकको रुपमा मनाइन्छ भने भारतमा भगवान रामले रावणको बध गरी सत्यगलाई पुनःस्थापना गरेको खुसीयालीको रुपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ । तर, जे भए पनि यो पर्व सत्य र असत्यको लडाइँमा सँधै सत्यको नै जित हुने सन्देशसहित हरेक हिन्दूले मनाउने गर्छन् ।